Iindaba - Kutheni le nto oomatshini bonozipho bezipho bethandwa kangaka?
Ukudubula Umatshini woMdlalo weBhola
Kutheni oomatshini bonozipho bezipho bethandwa kangaka?
Claw oomatshini bonodoli kunye nazo zonke iintlobo zoomatshini bezipho abathengisa ngoku phantse kuyo yonke indawo. Ukongeza kwiivenkile zomatshini woonopopi, bakwiiivenkile zeemarike, ecaleni kweemovie, kwiivenkile zevenkile zeempahla zabantwana okanye kwiivenkile zokutyela, nakwisango levenkile ezinkulu zevenkile.
Loluphi uhlobo lwabathengi ngabo banamava wenzipho yedoli?
Kutheni le nto bekhetha umatshini wonodoli uzipho? Yintoni ebenza bakulungele ukuqhubeka nokuphosa imali?
Njengoko sonke sisazi, amabhinqa aselula kunye nabantwana ngamaqela aphambili abathengi kubathengi bozipho. La maqela mabini abadlali ngabamaqela abathengi angenangqondo. Kulula ukudlala oomatshini bonodoli ngenxa yezi zinto zithandekayo, zithandekayo. Ukongeza, kuluntu lwanamhlanje, isantya sobomi siyakhawuleza, kwaye nexesha labantu liyaqhekeka. Uzipho kumatshini wedoli yindlela ekrelekrele yokusebenzisa ixesha eliqhekeziweyo labantu abemi emigceni, belinde iimoto, njl.njl. Ke ngoko, izibini, usapho, amabhinqa aselula kunye namanye amaqela ngabanini bezixhobo zoonodoli rhoqo. Sisitshixo sokutsala abantu abancinci ukuba bahambisane nomkhwa, baqonde umhombiso wevenkile, kwaye basebenzise umhombiso wevenkile yangaphakathi ukwenza abathengi bathathe iifoto kwaye basasaze, kwaye benze ubhengezo lwesibini
Xa umhlobo oyinkwenkwe ofuna ukubonisa umtsalane wakhe ebona ukuba intombazana ayithandayo ifuna unodoli kumatshini woonodoli, inkwenkwe iya kuvolontiya ukubeka imali ukuze ibambe unodoli. Isizathu silula, ukubonisa nje amandla akhe okubamba unodoli. Ukujonga oonodoli ngaphakathi komatshini woonodoli, zihambise ngononophelo iinzipho zazo kancinci, ungasathethi ke ukuba awukwazi ukubamba unodoli. Nguwo lo mgudu unyanisekileyo onokutsala amantombazana.
Ukuba ukutsala amehlo sisiqalo, ke unodoli sisiseko somatshini wodoli, endikholelwa ukuba sonke siyaqonda. Unodoli omhle kwaye omtsha, kufuneka athandeke, ngakumbi abantwana kunye namantombazana. Ezinye zezinto ezintle, okanye ezintle, okanye ezigqibeleleyo, okanye izipho ezisefashonini, zivumele wonke umntu ukuba azifune
Ewe, i-IP eyaziwayo lukhetho olutsha. Njengoko sonke sisazi, i-IP eshushu ilandelwa linani elikhulu labalandeli. Ukuqaliswa kweemveliso zepheripherali ezithandwayo ze-IP ngokwendalo kuya kutsala abathengi abaninzi
Kubathengi, ukudlala umatshini woonodoli kunokuzisa imincili kunye nokutsha qho. Abantu abaninzi abatsha bawuthatha lo mdlalo njengendlela yokukhupha uxinzelelo. Oonodoli, ubuhle bezipho yimveliso yokuqala yokutsala abathengi. Ke ngoko, iimveliso zomxholo woonodoli kufuneka zihlaziywe rhoqo. Okwangoku, iimveliso eziphambili zizinto zenkcubeko kunye nezinto zokuyila, ezinje ngodoli ophambili. AmaJapan eze nomatshini uzipho gem, umatshini uzipho ikeyiki, kunye nomatshini uzipho yezihlangu, nto leyo eyandisa ngakumbi inani labasebenzisi